Belkin anotangisa yakananga powerbank yeApple Watch iyo yauchada | IPhone nhau
Belkin anotangisa yakatarwa powerbank yeApple Watch iwe yauchada
Belkin Iyo ndeimwe yevagadziri vanosarudzwa nevashandisi veApple nekuti inowanzo kupa zvese izvo zvigadzirwa izvo iyo Cupertino firm inosimbirira kuti isatangise, uye wadii wadaro, chaizvo nekuti izvo zvigadzirwa izvo, pasina kuve zvakachipa, zvinowanzoita mari shoma pane zvakaenzana. kubva kuApple, senge mabhatiri kesi.
Iva sezvazvingaita, Belkin achangobva kuburitsa yakasimba chaizvo uye yakanaka chaiyo pombi yemagetsi yeApple Watch iyo inobvumidza iwe kuchaja yako Apple Watch chero kwaunoenda. Ngatitarisei nezvechi chigadzirwa chitsva cheBelkin chinogona kukubvisa mumatambudziko mazhinji.
Zita iro Belkin akapa ichi chigadzirwa hachisi icho chakanyanya kushambadza chatingafungidzira, kunyangwe tichifunga kuti Apple Watch chigadzirwa chakasarudzika, inogona kunge isingaise dambudziko rakanyanya. Inonzi Boost Up Power Charge 2KIyo idiki chaizvo uye ine Apple Watch charger kuitira kuti tikwanise kuichaja chete nekuiisa pamusoro. Iri bhatiri rinokutendera iwe kubhadharisa 3,5 nguva dzakazara yako Apple Watch Series 4, kunyangwe ichienderana neshanduro dzese dziripo pamusika weiyo smart wachi kubva kukambani yeCupertino.
Izvi zvichawedzera hupenyu hwebhatiri hweApple Watch kusvika maawa makumi matanhatu nemana, Asi chinhu chimwe iwe chaunofanira kujekesa nezvacho, haungawane mutengo unodhura chaizvo, mune iyi nyaya tichafanira kubhadhara zvisingasviki makumi matanhatu euros, iri pazasi pezvimwe zvigadzirwa zveBelkin zvine mabasa akafanana anoenda pamusoro pezana remamiriyoni, asi uchiri mutengo wakakura wechigadzirwa chakagadzirirwa kubhadharisa Apple Watch kana tisina plug iripedyo. Ehezve, Belkin yagadzira slip, inoshandisa microUSB kuibhadharisa, hapana Mheni tambo kana USB-C.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Belkin anotangisa yakatarwa powerbank yeApple Watch iwe yauchada
Mashandisiro Ekushandisa Yevabereki Kudzora pane iPhone uye iPad
WhatsApp inomira kushanda paIOS 7, uchiri kuishandisa?